Wakiilka Qaramada midoobe ee Soomaaliya oo faraha lagalay khilaafka madaxda dalka Soomaaliya |
Wakiilka Qaramada midoobe ee Soomaaliya oo faraha lagalay khilaafka madaxda dalka Soomaaliya
Ergayga Qaramada Midoobay ee Soomaaliya, Nickolas Kay ayaa ka dalbaday madaxda dowladda Soomaaliya inay ku xalliyaan khliaafkooda si dastuuri ah, hay’adaha dowladdana ay ku shaqeeyaan si mideysan.
Danjire Kay ayaa xusay in khilaafka iminka u dhexeeya madaxda dowladda uu yahay mid aan wanaagsanayn, loona baahan yahay inay ku xliyaan dastuurka sida ugu dhaqsiyaha badan, si uusan saameyn ugu yeelan howlaha dowladda.
Wakiilka Qaramada Midoobay ayaa hadalkiisan ka sheegin dabaal-daggii halkii sano ee xafiiska uu madaxda ka yahay ee UNSOM uu uga howl-billaabay gudaha Soomaaliya oo lagu qabtay Muqdisho.
“Hoggaamiyeyaasha dowladda Somalia waxaan ugu baaqayaa inay khilaafkooda sida ugu dhaqsiyaha badan ay ugu xalliyaan dastuurka, waxaana rajeynayaa in dalabkan ay iga aqbali doonaan,” ayuu Kay ku yiri hadal uu jeedinayay.
Madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud ayaa shalay shaaciyay in uusan jirin khilaaf u dhexeeya madaxda dowladda, balse ay jiraan kala aragti-duwanaasho yar oo la xalliyay, inta dhimanna lagu dhameyn doono is-afgarad.
Sidoo kale, ra’iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa isaguna maalmo ka hor sheegay inuusan jirin khilaaf u dhexeeya madaxda dowladda ayna isaga iyo madaxweyne Xasan Sheekh si wadajir ah u wadaan howlaha ay ugu adeegayaan bulshada, inkastoo uusan sheegin inay jirto kala aragti duwanaasho.
Wakaalada Wararka Somalimedia
info@somalimedia.co.uk Apcalis SX online, clomid without prescription.